Plezi One: तपाईंको B2B वेबसाइटको साथ लीडहरू उत्पन्न गर्न नि: शुल्क उपकरण | Martech Zone
धेरै महिनाको निर्माण पछि, प्लेजी, एक SaaS मार्केटिङ स्वचालन सफ्टवेयर प्रदायक, सार्वजनिक बिटा, Plezi One मा आफ्नो नयाँ उत्पादन सुरु गर्दैछ। यो नि:शुल्क र सहज उपकरणले साना र मध्यम आकारका B2B कम्पनीहरूलाई उनीहरूको कर्पोरेट वेबसाइटलाई नेतृत्व उत्पादन साइटमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ। तल यो कसरी काम गर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्।
आज, वेबसाइट भएका 69% कम्पनीहरूले विज्ञापन वा सामाजिक सञ्जाल जस्ता विभिन्न च्यानलहरू मार्फत आफ्नो दृश्यता विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये 60%सँग उनीहरूको कारोबारको कति वेब मार्फत हासिल हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टि छैन।
सबै फरक सम्भावित डिजिटल मार्केटिङ रणनीतिहरूको जटिलताको सामना गर्दै, प्रबन्धकहरूलाई दुईवटा सरल चीजहरू चाहिन्छ: तिनीहरूको वेबसाइटमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्न र वेबमा लीडहरू उत्पन्न गर्न।
5 भन्दा बढी कम्पनीहरूलाई यसको अल-इन-वन मार्केटिङ स्वचालन सफ्टवेयरको साथ समर्थन गरेको 400 वर्ष पछि, Plezi Plezi One को अनावरण गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। यस नि: शुल्क सफ्टवेयरको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि वेबसाइटलाई प्रमुख जेनेरेटरमा रूपान्तरण गर्नु हो, उनीहरूले सुरुवात गरेको क्षणदेखि नै धेरै व्यवसायहरूलाई समर्थन गर्न।
तपाईंको वेबसाइटलाई प्रमुख जेनरेटरमा रूपान्तरण गर्नको लागि एक सरल उपकरण
Plezi One ले कम्पनीहरूको साइटहरूमा स्वचालित सन्देशहरूका साथ फारमहरू थपेर योग्य नेतृत्वहरूको उत्पादनलाई सहज बनाउँछ। यसले तपाइँलाई साइटमा प्रत्येक लीड के गरिरहेको छ, र सफा ड्यासबोर्डहरूसँग हप्ता पछि कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर बुझ्न पनि अनुमति दिन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको डिजिटल यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र अझै पनि नेतृत्व उत्पादन र वेब ट्र्याकिङ संयुक्त को लागी उत्तम समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो विचार गर्न को लागी केहि छ। को मुख्य लाभ प्लेजी एक यो हो कि तपाइँसँग यसलाई प्रयोग गर्न वा तपाइँको मार्केटिङ सुरु गर्न कुनै प्राविधिक ज्ञान हुनु आवश्यक छैन। यो कसरी काम गर्छ यहाँ छ।
आफ्नो नेतृत्व पुस्ता रणनीति सुरु गर्नुहोस्
फारमहरू एक अज्ञात आगन्तुकलाई वेबसाइटमा योग्य नेतृत्वमा परिणत गर्ने सबैभन्दा सुविधाजनक र प्रत्यक्ष तरिका हो। र त्यहाँ एक आगन्तुकलाई फारम भर्नको लागि धेरै अवसरहरू छन्, चाहे यो सम्पर्कमा रहनुहोस्, उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्, वा सेतो पेपर, न्यूजलेटर वा वेबिनार पहुँच गर्नुहोस्।
On प्लेजी एक, तपाईंले नयाँ स्रोत थप्ने बित्तिकै फारम सिर्जना गरिन्छ। Plezi ले विभिन्न टेम्प्लेटहरू प्रदान गर्दछ, प्रश्नहरू खरिद चक्रका चरणहरूसँग मेल खाने विभिन्न प्रकारका फारमहरूमा अनुकूलित हुन्छन् (र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक आगन्तुकलाई छिर्नुहुन्न जो केवल प्रश्नहरूको साथ तपाइँको न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्न चाहन्छ)।
यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै फारम टेम्प्लेट सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ सम्पादक मार्फत त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँ प्रयोग गर्न चाहनुहुने क्षेत्रहरू चयन गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो वेबसाइट डिजाइन मिलाउन फारमहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं GDPR का लागि आफ्नो सहमति सन्देश पनि आफू अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले टेम्प्लेटहरू सिर्जना गरिसकेपछि, तपाईंले तिनीहरूलाई एक क्लिकमा आफ्नो साइटमा थप्न सक्नुहुन्छ!
तपाईले फलो-अप इमेलहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन स्वचालित रूपमा फारम भरेका व्यक्तिहरूलाई पठाइन्छ, चाहे त्यो उनीहरूलाई अनुरोध गरिएको स्रोत पठाउने हो वा उनीहरूको सम्पर्क अनुरोधको हेरचाह गरिएको छ भनी उनीहरूलाई आश्वासन दिन। स्मार्ट फिल्डहरू प्रयोग गरेर, तपाइँ यी इमेलहरूलाई व्यक्तिको पहिलो नाम वा स्वचालित रूपमा अपलोड गरिएको स्रोतको साथ निजीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।
श्रोताको व्यवहार बुझ्नुहोस् र योग्य नेतृत्व लिनुहोस्
अब जब तपाइँका आगन्तुकहरूले तपाइँको फारमहरू भर्न थालेका छन्, तपाइँ कसरी उनीहरूको जानकारीको फाइदा लिनुहुन्छ? यो हो जहाँ Plezi One's Contacts ट्याब आउँछ, जहाँ तपाइँले तपाइँलाई आफ्नो सम्पर्क जानकारी दिएका सबै व्यक्तिहरू फेला पार्नुहुनेछ। प्रत्येक सम्पर्कको लागि, तपाईंले धेरै चीजहरू फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई आफ्नो दृष्टिकोण निजीकृत गर्न मद्दत गर्नेछ।:
आगन्तुकको गतिविधि र इतिहास सहित:
सामग्री डाउनलोड गरियो
तपाईंको साइटमा हेरिएका पृष्ठहरू
तिनीहरूलाई तपाईंको साइटमा ल्याउने च्यानल।
सम्भावनाको विवरण। सम्पर्कले अन्य सामग्रीसँग अन्तरक्रिया गरेर नयाँ जानकारी दिने बित्तिकै अपडेट हुन्छ:
पहिलो र अन्तिम नाम
यो ट्याबलाई मिनी ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्लेटफर्मको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ (सीआरएम) यदि तपाईंसँग अझै छैन भने। तपाइँको बिक्री टोलीले तपाइँको सम्भावना संग सम्बन्ध को विकास को ट्रयाक राख्न को लागी प्रत्येक रेकर्ड मा टिप्पणीहरु थप्न सक्छ।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा तपाइँको दर्शकहरु को अन्तरक्रियाहरु को सबै जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, यी अन्तरक्रियाहरु रेकर्ड गरिएको छ। तपाईंका दर्शकहरूले के खोजिरहेका छन् र उनीहरूले कुन सामग्रीमा रुचि राख्न सक्छन् भन्ने बारे तपाईंसँग राम्रो विचार हुनेछ।
ट्र्याकिङ स्क्रिप्टले तपाईंलाई देखाउनेछ कि तपाईंको सम्भावनाहरू कहाँबाट आउँदैछन्, तिनीहरूले तपाईंको वेबसाइटमा के गर्दैछन् र तिनीहरू कहिले फिर्ता आउँछन्। यो एक लाभदायक सुविधा हो किनभने यसले तपाइँसँग कुराकानी सुरु गर्नु अघि तपाइँलाई अन्तरदृष्टि दिन्छ। एनालिटिक्सले तपाईंलाई तपाईंको सम्भावनाहरू ट्र्याक गर्न र बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।
तपाइँको रणनीति को प्रदर्शन को विश्लेषण
रिपोर्ट खण्डले तपाईंलाई आफ्नो मार्केटिङ कार्यहरूको तथ्याङ्क एकै नजरमा हेर्न अनुमति दिन्छ। Plezi ले डेटामा फोकस गर्न रोजेको छ जुन तपाईंको साइटको प्रदर्शन र तपाईंको मार्केटिङ रणनीति बुझ्नको लागि आवश्यक छ, भ्रामक र डिस्पेन्सेबल मेट्रिक्समा बस्नुको सट्टा। यो एक प्रबन्धक वा विक्रेता को लागि डिजिटल मार्केटिङ संग पकड प्राप्त गर्न को लागी एक राम्रो तरिका हो!
यहाँ तपाइँ तपाइँको साइट मा भएको समय को एक निश्चित अवधि को लागी सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ, आगन्तुकहरु को संख्या र मार्केटिङ लीडहरु संग, साथै तपाइँको रूपान्तरण फनेल को ग्राफ को लागी तपाइँको मार्केटिंग ले कति ग्राहकहरु लाई ल्याएको छ। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) खण्डले तपाईंलाई कति कुञ्जी शव्दहरूमा राखिएको छ र तपाईं कहाँ रैंक गर्नुहुन्छ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, प्लेजी एक कम्पनीको मार्केटिङ रणनीतिको मुटुमा रहेको उपकरणको लागि तरल अनुभव प्रदान गरेर अत्यधिक जटिल (र प्रायः कम प्रयोग गरिएका) समाधानहरूको दाना विरुद्ध जान्छ।
यसले डिजिटल मार्केटिङको नट र बोल्टहरू बुझ्न र तिनीहरूको वेबसाइट मार्फत लीडहरू उत्पन्न गर्न सुरु गर्न समर्पित टोली नभएका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन सहज अनुभव प्रदान गर्दछ। सेट अप गर्न सजिलो, प्रयोग गर्न सजिलो र 100% नि:शुल्क! Plezi One मा प्रारम्भिक पहुँच प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
Plezi One को लागि यहाँ नि: शुल्क साइन अप गर्नुहोस्!
टैग: b2bb2b नेतृत्व उत्पादनसीआरएमफारम सिर्जनाफारम टेम्पलेट्सफारम उपकरणनेतृत्व क्याप्चरनेतृत्व जनरलनेतृत्व पुस्तानेतृत्व योग्यताpleziplezi एकनेतृत्व योग्यआगन्तुक गतिविधि